The Top 10 Spamming ISPs nwere ike iju gị anya. Martech Zone
Satọde, 2 Juun 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
site Amgha. Nke a bụ nnọọ nzuzu, ọ bụghị ya? Verizon na ATT (na Yahoo!) ma tout ha Spam-igbochi ike… ma ha bụ nnọọ ndị ISPs bụ isi iyi nke ihe ndị kasị spam! Ọ bụrụ na Spamhaus nwere ike ịmata nsogbu ndị a ma soro ha laghachi, kedu ka Verizon na ATT (na ndị ọzọ) si enweghị ike iji ịdị uchu soro ma mechie ndị ọrụ a?
Ezigbo enyi m, Bill, nwere ihe atụ kachasị mma maka ọnọdụ dị ka nke a… Ọ dị ka onye na-ekpochapụ onye na-ahapụ ndị ọchịagha!
Ọrụ 10 Spam kachasị njọ ISP
Dị ka na 02 June 2007
Number nke Ugbu a
Okwu Spam mara
Ọ bụrụ n'ịchọrọ n'ezie iji ụzọ Machiavellian bịakwute ya, kedu ụzọ ka mma iji spam karịa ịnọ n'ọnọdụ ISP? Ọ bụrụ na inwere igbe ozi e-mail, gịnị ga-egbochi gị? = (E wezụga na dum ahịa ọnwụ ihe.
Ma ọ dịkarịa ala, Yahoo, Google, na MSN adịghị na ndepụta ahụ.
Obi abụọ adịghị ya na ndị a ga-abụ TOP10 ISP - enweghị ntaramahụhụ achọrọ - Dịka VSNL bụ India # 1 ISP